Njengoba wazi, zonke izibungu yisinanakazana emzimbeni womuntu kuholela sensitization futhi buthakathaka amasosha omzimba. Ezinye izifo esibangelwa amagciwane womuntu (kuleli cala - protozoan), osebenza giardiasis. Odokotela abaningi linqume izidakamizwa "Nemozol" nge giardiasis.
Lokhu nomuthi is ejenti anthelmintic kokuba spectrum ezibanzi umsebenzi. Ukusebenza kahle eliphezulu kakhulu ithuluzi siyenzeka ekwelapheni cishe zonke helminthiasis. Ukulungiselela "Nemozol" Giardiasis kunomphumela elinamandla izimuncagazi njengoba albendazole, ikhemikhali yayo esemqoka asebenzayo ngokuba esuselwe carbamate benzimidazole kuqinisekisa ukuchayeka letindzala, aguqulwe kwesibindi sulfoxide albendazole. Leli thuluzi akuyona kulondeke njengokuba ezinye izidakamizwa - inhibitor ka polymerization we-beta-tubulin yochungechunge benzimidazole, kodwa kuphumelela kangcono kunokuthi kubo.
Classic izidakamizwa ethola "Nemozol" ngesikhathi giardiasis: 0.4 g nsuku zonke izinsuku 5. Ngalesi Isikali 86% eziguli alulame ngokushesha esuka ezithathelwanayo poliparazitarnyh pathologies. Ukwelashwa nokuvikelwa giardiasis "Nemozolom" kungenziwa zaphathwa abadala kanye nezingane. Odokotela ngesikhatsi ukwelashwa ngalo muthi, ukudla okunomsoco nendlela yokuphila efanele alulame ngokugcwele.
Ukulungiselela "Nemozol" ikhiqizwa ngendlela amaphilisi, ukumiswa, amaphilisi chewable kanye amaphilisi camera. isinyathelo kwemithi ejenti antihelminthic aphumelele poly- futhi monoinvaziyah. Ikakhulukazi kuyaphumelela ngokumelene izibungu cestodes (Taenia solium futhi Echinococcus granulosus) futhi nematodes (Strongyloides stercolatis).
Nikeza le izidakamizwa ngesikhathi neurocysticercosis, Enterobiasis, echinococcosis viscera, ascariasis, trihotsefaleze, strongyloidiasis, opistorhoze, microsporidiosis, ankilostomidoze helminthiasis okuxubile. Izidakamizwa "Nemozol" nge giardiasis nezinye kucabanga kudinga nokuqapha njalo igazi isithombe. Lapho leukopenia edingekayo ukuqedwa yokwelapha. Iziguli ubudala zokuzala ngaphambi kokuba baqale ukwelashwa ngalo muthi, kufanele uhlolwe sokukhulelwa neluhlolo ngumuntu wezifo zabesifazane kanye phakathi ukwelashwa kufanele basebenzise izinto zokuvimbela inzalo ethembekile. Iziguli kuyabekwa ebulilini izidakamizwa kufanele ziqashwe ngokucophelela. Udokotela ukuba khona ngesikhathi sihlale njalo siqaphele kokusebenza kwesibindi.
Njengoba ukuphuza "Nemozol" nge giardiasis? Uphuzwe emva ukuphatha ukudla, amaphilisi ngesikhathi esifanayo musa ukuhlafuna. Umuthi beyihlanza ngamanzi. Kubantu abadala, umthamo nsuku zonke 0.4 g - uphuzwe ngesikhathi. Izingane ezineminyaka engu-6 kuya aqoke izidakamizwa ngesikhathi 6 mg ngayinye 1 kg isisindo ingane. Ukusetshenziswa ezahlukene izidakamizwa laxatives ayidingekile. Lapho giardiasis kungenzeka ukunciphisa izinga wezinsuku ezinhlanu Inkambo yokwelashwa izinsuku ezintathu.
Izimo ukusetshenziswa kwalesi imithi zihlanganisa ukukhulelwa, hypersensitivity, lactation, iminyaka engu-6. Nge ekhethekile ngokuqapha prescribers iziguli "Nemozol" Giardiasis abaphethwe isifo sokusha kwesibindi, yokwehluleka kwesibindi, pathologies ngwengwzi.
imiphumela emibi izidakamizwa kukhona isicanucanu nokuhlanza, transaminases isibindi ephakeme, amajaqamba lesisu, izimpawu meningeal, isiyezi, ubuhlungu bekhanda, leukopenia, agranulocytosis, thrombocytopenia, granulocytopenia, pancytopenia izinhlungu, ukulunywa, ukuqubuka kwesikhumba, komzimba, kahle izinso umsebenzi, umfutho ophakeme wegazi, Alopecia. Uma ukweqisa izidakamizwa ukwelashwa lingaze, lavage esiswini kanye isebenze namalahle indlela.
Esikhathini nokuxhumana zomuthi nge dexamethasone futhi cimetidine ukwenyuka igazi lokuhlala albendazole.
Tablets kusukela kolwelwesi. Yini amaphilisi ukwelapha kolwelwesi?
"Zodak": yokusetshenziswa, analogs "Zodaka" eshibhile
Triptans ngoba migraine. Triptans: izidakamizwa amanani
Biography Ivan Demyan ( "7b" iqembu)
Ngingazi kanjani ukuthi ngizokhululwa ngaphandle?
Okhalweni thinnest emhlabeni
Kungani dream of a Maniac? Sifunda!